कुनै बेला क्यासेट बेचेर गुजारा चलाउँथे यी बंगाली सुपरस्टार, जो शाहरूख खान जत्तिनै लोकप्रिय छन् – Medianp
कुनै बेला क्यासेट बेचेर गुजारा चलाउँथे यी बंगाली सुपरस्टार, जो शाहरूख खान जत्तिनै लोकप्रिय छन्
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २९, २०७४११:२१0
काठमाडौ, २९ माघ । पछिल्लो केही समयदेखि सामाजिक संजालमा एक व्यक्तिको बारेमा निकै चर्चा भइरहेको छ । ती व्यक्तिका बारेमा धेरै कमलाई जानकारी छ । ती व्यक्ति बंगलादेशमा निकै चर्चित छन् । उनलाई एक सुपरस्टारकारूपमा लिइएको छ । उनी हुन्, बंगलादेशी एक्टर आलम उर्फ अलोम बोगरा । आलोमको लोकप्रियताका हेर्न अरू केही गर्न पर्दैन उनका फ्यानले बनाइदिएको फेसबुक नै हेरे पुग्छ । एकसमय यस्तो थियो, जब आलेम क्यासेट बेचे मुश्किलले घर चलाउँथे ।
जुलाई, २०१६मामीरपुरको शेर–ए बंग्ला स्टेडियममा आलोम पनि थिए । त्यो समयमा मिडिया र सारा मानिसहरू उनका नजिक थिए । अभ्यासका क्रममा बंगलादेशी टिमका खेलाडीले देखे की जो कोही आलोमसँग् सेल्फी खिचिरहेका थिए । बांग्लादेश क्रिकेट टिमका खेलाडी तास्कीन अहमदका अनुसार, आलोम उनीहरूका मन पर्ने हिरो हुन् ।
आलोमको पुरा नाम अशरफुल आलम सईद हो । आलोमका जन्द निकै गरिब परिवारमा भएको थियो । उनी १० बर्षको हुँदा बाबुले अर्को विवाह गरे । गरिबीका कारण उनले पढ्न पाएनन् र सात कक्षामा फेल भए । त्यसपछि उनले पढाइ छोडेर सिडी बेच्ने काम शुरू गरे । उनले केबल नेटवर्क विजनेश समेत थाले । उनले महिनामा मुस्किलले ७०–८० रूपैंया कमाउथे ।
उनले एकपटक क्यासेटमा मोडलको फोटो देखे । त्यसपछि उनको दिमागमा मोडलिङ गर्ने सोच आयो । सुरूमा उनलाई सिडी बेच्ने मान्छे कसरी मोडल बन्न सक्छ ? भन्ने लाग्यो । मानिसहरूले उनलाई मोडल बन्न नसक्ने बताए, तर उनले कसैको कुरा सुनेनन् ।
त्यसपछि २००८ मा अलोमले आफैले म्यूजिक भिडियो बनाए । त्यसलाई पहिला केबल टिभीमा देखाइयो । उनको भिडियो मानिसहरूले मन पराए र विस्तारै बंगला देशमा चर्चित बने ।
कसैले उनको भिडियो युट्युबमा अपलोड गरिदियो, त्यसपछि उनको यो भिडियो भाइरल भयो । युट्युबमा उनको भिडियो देखेपछि उनलाई कामका आफर आउन थाले । अहिले उनीलाई एक शर्ट फिल्म, दुई टिभी ड्रामा र विज्ञापनमा खेल्ने अफर छ ।
आलोमलाई विदेशबाट समेत अफर आइरहेको छ । उनलाई अमेरिकाबाट समेत अफर आएको बताइएको छ । त्यसका लागि उनको पुरै टिम दुई महिनाका लागि अमेरिका जानेछ । उनले सलमान खानको फिल्मको एक गीतको म्यूजिक भिडियो समेत बनाएका छन् । उनका ५०० भन्दा बढी म्यूजिक भिडियो आइसकेका छन् । उनले अहिले टिभी बिजेनमा सक्रिय छन् । ‘सोक–सोन्धा केलब नेटवर्क’ उनको नाममा छ । एजेन्सी
सामुदायिक विद्युत् केन्द्रबाट समुदायलाई सुविधा
प्रचण्डलाई सेरेमोनियल अध्यक्ष बनाएर आफू शक्तिशाली महासचिव बन्ने वामदेवको भित्री रणनीति
शुक्रबार रिलिज : ‘चौका दाउ’ र ‘भिलेन’ मध्ये कसले मार्ला बाजी ?
नौ महिनादेखि कामै नपाएपछि फोनमै छोरीसँग कुरा गरेर चित्त बुझाउँछन् कामेश्वर चौरासिया
यी हुन विश्वकै सबैभन्दा धनी मोडलहरु ! जसको सम्पति थाहा पाउनुभयो भने पर्नुहुनेछ चकित !